Saraakiil katirsanaa Ciidamada Nabad Sugidda dowladda oo degmada Shibis lagu dilay.
Tuesday September 03, 2019 - 21:16:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubeysan oo caawa ka dhacay mid kamida xaafadaha magaalada Muqdisho oo ay si aad ah ugu xoogantahay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Rag hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa gudaha degmada Shibis ku dilay laba sarkaal oo katirsanaa Nabad Sugidda dowladda, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay toogteen labada sarkaal kadibna ay ka furteen bastoolado ay wateen.
"Ciidadamada Mujaahidiinta ayaa degmada Shibis ku khaarijiyay laba kamid ah saraakiisha Sirdoonka Kooxda Ridada laba bastooladoodna waa kasoo qaniimaysteen" ayaa lagu yiri war ay baahisay Idaacadda Andalus.
Dad ku sugnaa goobta dilku ka dhacay ayaa sheegay in ay layaabeen geesinimada iyo dhiiranaanta dagaalyahanada Al Shabaab oo falka dilka ah ka gaystay goob ammaankeeda si aad ah loo adkeeyo ayna ku badanyihiin ciidamada Nabad sugidda qeybahooda kala duwan.